यस्ती छन् राहुल गान्धीकी नेपाली गर्लफ्रेण्ड ! यसरी भयो गोप्य भेटघाट - Darpanpost
» अन्तराष्ट्रिय » समाचार अंक: 14166
यस्ती छन् राहुल गान्धीकी नेपाली गर्लफ्रेण्ड ! यसरी भयो गोप्य भेटघाट
भारतीय कांग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धीले नेपाललाई ‘ट्राञ्जिट’ बनाएको विषयमा नयाँ खुलासा भएको छ । कुटनीतिक राहदानी भएपनि साधारण नागरिक सरह काठमाडौं आएका राहुल गान्धीले आफ्ना भेटघाट र गतिविधिलाई गोप्य राखे । स्रोतका अनुसार राहुल गान्धीले काठमाडौं बसाइका क्रममा एक युवती र उनको परिवारसँग डिनर गरेको रहस्य बाहिरिएको छ ।
चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने क्रममा राहुल गान्धीले काठमाडौंलाई ‘ट्राञ्जिट’ बनाएका हुन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौं बसाइका क्रममा राहुल गान्धीले बर्माका लागि नेपाली राजदूत भीमकृष्ण उदासकी छोरी सुम्निमा उदासँग भेटघाट र डिनर खाएका छन् ।
भारतको नयाँदिल्लीमा बसेर सुम्निमा उदासले केही समय सिएनएन टेलिभिजनमा काम गरेकी थिइन् । सुम्निमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिष्ट संग्राहलय बनाउने परियोजनामा कार्यरत रहेको बताइन्छ ।